१५ बर्से यु’वकले गर्लफ्रे’न्ड ग’र्भवती भएको कुरा मम्मीलाइ सुना’उदा, आमाले के गरिन् यस्तो ? – Ramailo Sandesh
काठमाडौं – उहाँले देशको परिस्थिति र समय आएको बताए पनि आफुले नेतृत्व लिनका निम्ति सबै नेतृत्व लिनका निम्ति सबै जनताले चाहनुपर्ने भने दोहोर्याए । देशको परिस्थिति र समय आएको छ, म फेरि दोहोर्याउछु तर , सबैले चाहनु पर्दछ ।
उहाँले थप्नुभयो उहाँले मुलुकको परिस्थिति अत्यन्त चि’न्ताज’नक रहेको बताउँदै आफु सक्रिय हुने सक्ने संकेत गरेका हुन् । देशको परिस्थिति अन्तयन्तै नाजुक अवस्थामा छ उहाँलले देशको चि’न्ता व्यक्त गर्दै बताउनु भयो । राजनितिक नेतृत्वप्रति आ’क्रो’श व्यक्ति गर्दै उहाँले वर्तमान नेर्तत्वलाई कागजको फुलमा सुवास खोज्ने आ’रो’प पनि लगाउनुभयो ।
अहिल परिस्थिति कस्तो छ भने देखिन दुबे, मखमली र गोदावरी फुलको मालाको महत्व नबुझुने तर , कागजको फुलको सुवास खोज्ने ,त्यो परिस्थितिमा हामी हिडिराख्ने जस्तो लाग्छ मलाई, राजा ज्ञानेन्द्रले भने, नेतृत्व नभा जस्तो देखिएको छ । पछिल्लो १० बर्षदेखि म बच्चालाई आफ्नो पेटमा हुर्काउन र उसलाई जन्म दिन सपना देखिरहेको छु ।
तर , म बच्चा सँधैका लागि आफुसँग राख्न चाहान्न् , न त म आमा नै बन्न चाहान्छु । यसै कारणले मैले सेरोगेट मदर बन्ने निर्णय लिएँ , जसकारण प्रसुतिपछि मलाई बच्चा मसँगै राख्न नपरोस । सेरोगेट आमा बन्ने विचार म २१ बर्ष हुँदा नै आएको थियो । म खाली गभ’एव’ती हुनुको अनुभव लिन चाहान्छु ।
म यति वुझुन चाहान्छु , एउटा बच्चा मेरो शरीरभित्र कसरी विकसित हुन्छ र म उसलाई आफ्नो ग’र्भभि’त्र कसरी हुर्काउन सक्छु ? म आफ्नो शरीरमा आउने परिवर्तनलाई हेर्न चाहान्छु, महशुस गर्न चाहन्छु । मेरो छाला कसरी तन्किन्छ । हेर्न चाहान्छु । म आफ्नो शरीरभित्र रहेको बच्चाको हलचललाई महसुस गर्न चाहान्छु ।
मैले सेरोगेसीका बारेमा फिल्मा हेरेँ र इन्टरनेटमा यसबारे पढँे । त्यसपछि मलाई लाग्यो म यहि गर्न चाहान्छु । म एक लामो सम्बन्धमा रहे । म जस्तै मेरो पुर्वप्रेमि पनि बच्चा चाहँदैन थिए, सेरोगेसीमा मेरो जति उनको लगाव थिएन । उसले कहिल्यै बुझेन म आफ्नो स्वास्थ्यलाई खतरामा राखेर किन गर्भवती हुन चाहान्छु, त्यो पनि यस्तो बच्चाको लागि जो मेरो हुँदै होइन ।
तपाई जान्न चाहानुहुन्छ होला, म आफ्नो बच्चा किन चाहान्न ? सन्तान पाल्नु एक ठुलो जिम्मेवारी हो । मानसिक रुपले र आफ्नो करिअरलाई हेर्दै म यति ठुलो जिम्मेवारीका लागि तयार छु जस्तो मलाई लाग्दैन । थाहा छैन यस जिम्मेवारीका लागि कहिल्यै तयार हुन्छु वा हुन्न । म एक इभेन्ट कम्पनीमा काम गर्छु । यस बाहेक म एक क्रिएटिभ प्राजेक्टका लागि पनि काम गरिरहेको छु ।
यसका लागि म घण्टौ काम गर्छ चाहान्छु । फरक फरक देशमा पुग्न पर्छ । यस्तो प्रकारको कामसँगै एक सानो बच्चाको हेरचाह गर्नु मेरो लागि निक्कै गाह्रो हुनेछ । ग’र्भव’ती हुन पनि कम चुनौति कहाँ छ र , तर मलाई थाहा छ सेरोगेसीका लागि एक निश्चित समय दिनुपर्छ । मलाई मातृत्व अवकास मिल्छ र त्यसपछि म काममा फर्कन्छु । त्यस्तै , यदि म आफ्नै बच्चा जन्माउन चाहँे भने त्यो जिन्दगी भरीको जिम्मोरी हुनेछ ।
ग’र्भधा’रणपछिका अप्ठयारा पक्षहरुलाई पनि म राम्ररी जान्दछु । जस्तै कम्मर दुख्े थका’न, वि’रा’मी र अन्य धेरै मलाई यो पनि थाहा छ कि बच्चालाई जन्म दिनु सजिलो कुरा होइन । तर , म त्यस पिडा र असहजताको अनुभव गर्न चाहान्छु । मलाई थाहा छ , गर्भावस्थाका दौरान कोहि लगातार उल्टी गर्छन । म यी सबैका अनुभव लिन चाहान्छु ।
र हो, मलाई यस कुराको पनि डर छ कि नौ महिनासम्म बच्चालाई आफ्नो पेटमा राखेपछि मलाई उ प्रति लगाव हुनेछ । बच्चासँग आमाको लगाव जन्मनु अघिबाटै हुन्छ, किनकि पेटमै हुँदा पहिलो आवाज आमाको सुन्छ ।
तर जब म अरु कसैको बच्चा मेरो पेटमा छ भने यो अवस्था नआओस् चाहान्छु । अहिले मेरो उमेर करिब ३० बर्ष छ । गोपनियताको सर्तमा बीबीसीको अन्तरवार्ताबाट लिएको एक अंश काठमाडौं टुडेबाट ।
कहिल्यै नसुत्नुहोस् यी ४ पोजीसनमा, हुनसक्छ पेटका लागि खतरा